Iphrojekthi kaJon Entine's Genetic Literacy Project: Izithunywa ze-PR zeMonsanto, eBayer
Posted on October 7, 2020 by UGary Ruskin
UJon Entine ungumsunguli nomqondisi omkhulu we-Genetic Literacy Project, umlingani oqavile emizamweni yobudlelwano bomphakathi neMonsanto yokuvikela nokuvikela imikhiqizo yezolimo. U-Entine uyintatheli yangaphambilini oziveza njengomuntu onegunya kwezesayensi, kepha ubufakazi obuchazwe kuleli phepha bukhombisa ukuthi usebenza isikhathi eside no-PR futhi unobudlelwano obujulile nemboni yamakhemikhali futhi uxhaso lwezimboni olungadalulwanga.
Imvelaphi njengefemu iMonsanto PR
U-Entine ungumsunguli futhi uthishanhloko we-ESG MediaMetrics, inkampani yezobudlelwano bomphakathi eyayine IMonsanto njengeklayenti ngo-2011 lapho ifemu kubhaliswe i-GeneticLiteracyProject.org isizinda.
U-Entine waqashwa ngaleso sikhathi yiStatistical Assessment Services (STATS), iqembu elingenzi nzuzo izintatheli elizichaze njenge “umkhankaso we-disinformation”Lokho ihambisana nezikhundla zomkhakha yokwehlisa ukulinyazwa kwezempilo. IGenetic Literacy Project yathuthukiswa "njengohlelo lokuqondiswa kwezigwegwe olunama-STATS," ngokusho kuka izingobo zomlando zewebhu. Ngo-2015, i-Genetic Literacy Project yathutha ngaphansi kwesambulela seqembu elisha, iSayensi Literacy Project, elathola ifa le-STATS inombolo kamazisi wentela.
STATS bekuyi "umdlali omkhulu emkhankasweni wobudlelwano bomphakathi wokuhlambalaza ukukhathazeka nge-bisphenol A,”Ngokusho kweMilwaukee Journal Sentinel. Inhlangano yabazali bayo, iCentre for Media and Public Affairs (CMPA), ibikhona ekhokhelwa ugwayi omkhulu UPhillip Morris ngawo-1990 “ukukhetha izindaba ezigxeka ukubhema.” U-Entine wayengumqondisi we-CMPA ngo-2014/2015, ngokusho kumafomu entela.
Inja kaMonsanto yokuhlasela
IGenetic Literacy Project ihlasela kakhulu ososayensi, isayensi, izintatheli nabanye abagxeka iMonsanto noma imikhiqizo yayo. Imibhalo etholwe ngu I-US Ilungelo Lokwazi futhi ngecala ukusungula ukuthi iMonsanto ibambisana ne-Entine ne-GLP kumaphrojekthi we-PR ukukhuthaza nokuvikela ama-GMO kanye ne-pesticides. Lokhu kusebenzisana akuzange kudalulwe.
A Uhlelo luka-2015 lweMonsanto PR amagama we-Genetic Literacy Project phakathi kwe- "Abalingani bemboni" IMonsanto ihlele ukuzibandakanya emizameni yayo "yokuhlela ukukhala" mayelana a umbiko womdlavuza kusuka ku-International Agency for Research on Cancer (IARC). Inhloso kaMonsanto, ngokohlelo lwe-PR: “vikela isithunzi” seRoundup. I-GLP selokhu yathumela izindatshana ezingaphezu kwama-200 mayelana ne-IARC, eziningana zazo ukuhlaselwa ososayensi as ukukhwabanisa futhi abaqambimanga abani kuqhutshwa inzuzo nokuyize.
Umklomelo Uphenyo lukaLe Monde mayelana "neMonsanto Papers" ichaze i-Genetic Literacy Project njenge "webhusayithi eyaziwayo ye-propaganda" "enikezwa abantu be-PR abaxhumene nemithi yokubulala izinambuzane kanye nezimboni ze-biotechnology." IGenetic Literacy Project ibambe iqhaza elibalulekile emizameni kaMonsanto “yokucekela phansi inhlangano yomdlavuza yeNhlangano Yezizwe nganoma iyiphi indlela,” kubika iLe Monde.
Amaphepha we-Pro GMO osolwazi
Ngo-2014 nango-2015, i-Genetic Literacy Project isebenze neMonsanto nenkampani yabo ye-PR ukushicilela nokuphakamisa uchungechunge lwamaphepha e-pro-GMO abhalwe ngosolwazi. IMonsanto yabela yahlela amaphepha, yasetha ne-Genetic Literacy Project ukuze iwashicilele. Indima yenhlangano ayidalulwanga.
Uprofesa waseHarvard wehlulekile ukudalula ukuxhumana kweMonsanto, Boston Globe
Izindlela Zokukhuthaza Izazi ZikaMonsanto Ukubhala Izindatshana Ezisekela Ama-GMO, I-Bloomberg
Ngokwe-imeyili kaSeptemba 2014, Abaphathi beMonsanto bakhethe i-Genetic Literacy Project “njengendawo yokuqala” yokushicilela amaphepha oprofesa, nokwakha “uhlelo lokuthengisa” nenkampani ye-PR i-CMA ukukhuthaza amaphepha. Inkampani ye-PR i-CMA, manje ebizwa nge-Look East, iqondiswa nguCharlie Arnot. Ubuye agijime i- Isikhungo Sobuqotho Bokudla, engenzi nzuzo ethola uxhaso kuMonsanto, futhi inikela ku Iphrojekthi Yezofuzo.
Ixhumana neSyngenta neqembu eliphambili lezimboni
UJon Entine uboshelwe eduze ne Umkhandlu waseMelika weSayensi nezeMpilo (ACSH), iqembu eliphambili lenkampani lelo uthola imali evela eMonsanto nezinye izinkampani zamakhemikhali. I-ACSH ishicilele incwadi ka-Entine ka-2011, evikela i-atrazine, isibulala-zinambuzane esenziwe yiSyngenta. Ukubika ngu UTom Philpott kuMama Jones futhi Isikhungo Semidiya Nentando yeningi kutholakale ukuthi iSyngenta yayixhasa i-ACSH ngaleso sikhathi, nokuthi i-ACSH yacela iSyngenta ukuthi inikeze ngezimali ezengeziwe zephrojekthi eyayihlanganisa nencwadi ezwakala iyincwadi ethi Entine. USyngenta ubefuna abalingani benkampani yangaphandle ukusiza inkampani vikela i-atrazine.
Ngo 2009, Abasebenzi be-ACSH babuze uSyngenta ngoxhaso lwama- $ 100,000, “oluhlukile nolwehlukile kunkxaso yokusebenza jikelele iSyngenta ibilokhu inikela ngokukhululeka eminyakeni edlule,” ukukhiqiza iphepha kanye "nencwajana elungele abathengi" mayelana ne-atrazine. Ngo-2011, I-ACSH imemezelwe Incwadi entsha ka-Entine kanye “nephepha lokuma elinomngane, elifushanisiwe,” zombili zivikela i-atrazine. U-Entine utshele uPhilpott ukuthi “akazi” ukuthi uSyngenta uxhasa i-ACSH.
In Septhemba 2016, "ukudalulwa" Inothi lithe i-GLP ayitholanga mali ezinkampanini, kodwa iveze u- $ 27,500 "wokudlula" ovela ku- "Academics Review Charitable Association," okubukeka sengathi ayikho. Leli qembu ngokusobala Izifundo zeRegional.org, iqembu langaphambili elitholile iningi lezimali zalo ezivela embonini yezibulala-zinambuzane iqembu lezebhizinisi, kepha lithi alizimele ngemboni.
Ngo-2014 nango-2015, amafemu aphezulu ezibulala-zinambuzane asebenzise imali engaphezulu kwama- $ 300,000 emicimbini emibili ehlelwe yi-Genetic Literacy Project kanye neqembu eliphambili le-Academics Review ku-qeqesha ososayensi nezintatheli ukuhlela impikiswano mayelana nama-GMO nobuthi be-glyphosate, ”Ngokwamarekhodi entela nokubika ku I-Progressive. Imicimbi, ibizwa nge- Izinkambu zeBiotech Literacy Project, zabanjelwa e- IYunivesithi yaseFlorida ngo-2014 futhi UC Davis ngo-2015.
Ama-ajenda achaza le micimbi ngokuthi “ukuqeqeshwa kwamakhono okuxhumana” kososayensi nezintatheli ukusiza ukuqamba kabusha impikiswano yokuphepha kokudla kanye ne-GMO, futhi ithembise ukuhlinzeka ososayensi “ngamathuluzi nezinsizakusebenza ezidingekayo zokubandakanya kahle abezindaba futhi bavele njengongoti kwezomthetho ukulalelwa kohulumeni basekhaya, nokunye ukwenziwa kwemigomo kanye namathuba okufinyelela kubantu ahlobene nalokhu. ”